sawehlor: ဓါတ်ပုံမှရုပ်ရှင်သို့ပြောင်းပြီး ကိုယ်ပိုင်ဗီစီဒီတစ်ချပ် လုပ်ရအောင်
ပထမဆုံးမှာတော့ ဒီ software နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဆို ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ဟာ ပိုပြီးတော့ တွင်ကျယ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံစီကနေပြီး အိမ်က TV မှာ CD ခွေထည့်ပြီး ကြည့်နိုင် သည်အထိ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တင်ပြသွားပါမယ်။
ပထမဆုံး ၀ိုင်းပြထားတဲ့ New Icon ဆိုတာကို ကလစ်လိုက်ပါ။ ကလစ်လိုက်ရင် New Slide Show ဆိုပြီး Slide အသစ်လုပ်ဖို့ အတွက် box လေးတစ်ခု ကျလာပါ လိမ့်မယ်။
နောက် create ဆိုတာကို ကလစ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီနေရာမှာတင် ကိုယ်အဆင်သင့် သိမ်းထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ folder ရဲ့ destination နေရာကိုရွေးထားပါ။ ရွေးထားတဲ့ အချိန်မှာအောက်မှာပုံလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီပုံတွေ အကုန်လုံးကို select ပေးပြီးအောက်မှာ မြှားပြထားသလို Drag ဆွဲပြီး ထည့်လိုက်ပါ။ ဆွဲထည့်နေတဲ့အချိန်ကို ခဏ လေးစောင့်နေပါ။ ပုံအရေအတွက်များရင် များသလောက် ကြာနိုင်ပါတယ်။ အခုလုပ်မယ့် slide show မှာတော့ ပုံ 200 လောက်သုံးထားပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံရှိ သလောက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Drag ဆွဲထည့်လိုက်ရင် အောက်မှာ ပုံတွေဝင်သွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီလောက်အဆင့်နည်းနည်း၊ အချိန်နည်းနည်း လေး အတွင်းမှာတင်ပဲ slide show က အကြမ်းအနေနဲ့ ပြီးသွားပါပြီ။ ၀ိုင်းထားတဲ့ Play button လေးကို ကလစ် ကြည့်လိုက်ပါ။ play button ကတော့ အစမ်းအနေနဲ့ transition, song, photo တွေ အဆင်ပြေလား မပြေလား ဆိုတာကို ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေး တွေ အကုန်လုံးကို slide show အနေနဲ့ မြင်တွေ့ရပါလိမ့် မယ်။ ဒါက အမြန်ဆုံး slide show တစ်ခုပြီးသွားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီထဲမှာကိုပဲ နောက်ထပ်လုပ်နိုင်တာတွေ ထပ် ဖော်ပြသွားပါဦးမယ်။
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံအကြား အကူးအပြောင်း ကြားထဲမှာ slide style or transision တွေ ပြောင်းချင်တယ် ဆိုရင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ နေရာလေးကို ကလစ်လိုက်ရင် Choose Transition box ကြီးကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ နေရာမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ effect ကိုရွေးလိုက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ Video မှာ ကိုယ်ထည့်ထားတဲ့ effect ၀င်သွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ effect တွေကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံ တစ်ခုချင်းစီတော့ လိုက်လုပ်ရပါမယ်။
ဓာတ်ပုံရဲ့ effects မှာ ကိုယ်လိုသလို ပြင်နိုင်သလို၊ ဓာတ်ပုံတွေရဲ့အပေါ်မှာမှ ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်တရ စာသား လေးတွေ ရေးချင်ရင်တော့ slide caption ဖြစ်တဲ့ slide ထဲက slide option ထဲကမှ Caption ကိုရွေးပါ။ Short Cut အနေနဲ့ (ctrl + F9) နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် Slide Caption box ကျလာပြီး Cursor ကို အဆင်သင့်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့စာသားတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုရော၊ မြန်မာလိုပါ ရေးလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းတွေပါ ထပ်ဖြည့်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အလွယ်ထည့်လို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်ထည့်မယ့် သီချင်းတွေ ကိုလည်း Folder တစ်ခုထဲမှာ သီးသန်းစုစည်းထား လိုက် ပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ Drag background song here. Double click to edit ဆိုတဲ့ နေရာမှာ သီချင်းကို ဆွဲထည့် လို့ ရပါတယ်။ ပြီးရင် သီချင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ အစီအစဉ် တကျပြီးဖို့အတွက် Edit လုပ်လို့ရပါတယ်။
အကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ CD ထုတ်ဖို့အတွက် Create Output ဆိုတာကို ရွေးလိုက်ရင် Create Output Box ကျလာပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီနေရာမှာ ကိုယ်အလိုရှိသလို သိမ်းလို့ ရပါ တယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ဒီ Photo တွေကို Video အနေနဲ့ ပြန်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင် ဒါကို CD နဲ့သိမ်းလို့ရနိုင်တဲ့ Format အဖြစ် .mpg အနေနဲ့ သိမ်းလိုက်ပါမယ်။ Create ကို နှိပ်လိုက်ရင် Save Video File Box ကျလာပြီး ကိုယ်လို ချင်တဲ့ နေရာမှာ video file ကို save လုပ်လိုက်ပါ။ ဒီနေရာ မှာတော့ အခုဖန်တီးထားတဲ့ video file ကို MyCreation. mpg ဆိုပြီး save button ကို ကလစ်လိုက်ပါမယ်။
ဒီလို Save ကို ကလစ်လိုက်ရင် project ကနေ Video file အဖြစ်ပြောင်းနေတဲ့ပုံစံလေး ပြပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ပုံစံပါပဲ ။
အခုဆိုရင် ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ VCD လေး ပြီးသွားပါပြီ။ ဒါကို CD burn ပြီး TV ,VCD, DVD ,EVD အစရှိတဲ့ စက်တွေမှာ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ နောက်ထပ်လည်း ဒီ software မှာ ထပ်ပြီး စမ်းသပ်လို့ရပါ သေးတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကို Data အနေနဲ့ လုပ် ထားတော့ ဓာတ်ပုံသားတွေလည်း မပျက်စီးစေဘဲ စိတ် တိုင်းကျ ဖန်တီးရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် movie file ပြောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေကို နောက်ခံသီချင်းတွေနဲ့ လုပ်တာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ Desktop Background မှာ ခုဏနေက ပြောင်းထားတဲ့ movie file ကို CD မခုတ်ခင် ကွန်ပျူတာမှာတင် အစမ်း ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ်ကို လိုချင်ရင်တော့ http://www.soft32.com/Download/free-trial/ProShow_Gold/4-80674-1.html ဆိုက်မှာ free သွားယိူု့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက Trail Version ပါ။ ဒီစာအုပ်နဲ့ တွဲပါတဲ့ CD ထဲမှာလည်း software ကို တစ်ခါတည်း ထည့် ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေစွာနဲ့ လုပ်ဆောင် နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (Posted by - Knowledge Bridge)
Posted by saw ehlor at 20:14